समिट माइक्रोफाइनान्सको १००% हकप्रद खुल्यो, आवेदन भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » समिट माइक्रोफाइनान्सको १००% हकप्रद खुल्यो, आवेदन भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - भदौ २९ देखि समिट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको १००% हकप्रद सेयर बिक्री खुला भएको छ । समिटले १ः१ अनुपातमा ७ लाख २५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो । बैंकले प्रति किता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य गरेको छ । कात्तिक १ गतेसम्म यो हकप्रद सेयर भर्न पाइनेछ । यसमा भदौ ८ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड नारायणचौर, नक्साल काठमाडौं र समिट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बिर्तामोड ७, झापा तथा यसका अधिकांश शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, सनराइज बैंकका धनगढी, नेपालगंज, पोखरा, भैरहवा, नारायणगढ, वीरगंज र जनकपुर शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । हाल समिटको चुक्ता पुँजी ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद निष्कासनपछि भने समिटको चुक्ता पुँजी १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा माइक्रोफाइनान्सले ५ करोड ९५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । समिटको प्रतिसेयर आम्दानी ६९ रुपैयाँ १० पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २१२ रुपैयाँ ३९ पैसा छ ।